Shiinaha L-Theanine Soosaarka iyo Warshad | Mingxing
Macluumaadka muhiimka ah:
Magaca Ingiriisiga: L-Theanine
CAS MAYA: 3081-61-6
Qaaciddada Molecular: C7H14N2O3
Miisaanka molikalka: 174.2
Jaantuska qaab dhismeedka kelli:
L-theanine waa amino acid inta badan laga helo caleemaha shaaha iyo qadar yar oo ah boqoshaada Bo Bolete.Waxaa laga heli karaa shaaha cagaaran iyo kan madowba.
Waxa kale oo laga heli karaa kiniin ama qaab kiniin ah dukaamo badan oo dawooyin ah .Baadhitaanku wuxuu muujinayaa in L-theanine ay dhiirrigeliso nasashada iyadoon lulmayn Dad badan ayaa qaata L-theanine si ay uga caawiyaan yareynta buufiska iyo nasashada.
Baarayaasha waxay ogaadeen in L-theanine uu yareeyay walwalka iyo calaamadaha oo hagaagay.
L-theanine ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato kordhinta diiradda iyo feejignaanta. Daraasad 2013 ah ayaa lagu ogaaday in heerarka dhexdhexaadka ah ee L-theanine iyo caffeine (qiyaastii 97 mg iyo 40 mg) ay ka caawiyeen koox dhalinyaro ah inay si wanaagsan diirada u saaraan inta lagu jiro howlaha dalbashada.
Kaqeybgalayaasha daraasada ayaa sidoo kale dareemay feejignaan dheeri ah iyo daal farabadan guud ahaan. Sida laga soo xigtay daraasad kale, saameyntan waxaa lagu dareemi karaa ugu yaraan 30 daqiiqo.
Cilmi baarisyada qaar waxay soo jeedinayaan in L-theanine ay hagaajin karto shaqada nidaamka difaaca jirka. Hal daraasad oo lagu daabacay joornaalka Beverages ayaa lagu ogaaday in L-theanine ay gacan ka geysan karto yareynta dhacdooyinka infekshannada neef mareenka sare.
Daraasad kale ayaa lagu ogaaday in L-theanine ay gacan ka geysan karto hagaajinta caabuqa marinka mindhicirka. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo loona ballaariyo natiijooyinkaan.
L-theanine ayaa laga yaabaa inay faa'iido u leedahay kuwa la kulma cadaadiska dhiigga ee kordhay xaaladaha walaaca. Daraasad la sameeyay 2012 ayaa lagu arkay dadka sida caadiga ah la kulma cadaadiska dhiig karka ka dib hawlo maskaxeed qaarkood. Isla daraasadda, cilmi baarayaashu waxay xuseen in kafeynku leeyahay saameyn la mid ah laakiin aan faa'iido badan lahayn.
L-theanine sidoo kale waxay ka caawin kartaa wiilasha laga helay cillad yaraanta feejignaanta cillad la'aanta (ADHD) inay si fiican u seexdaan. Daraasad la sameeyay 2011 ayaa lagu eegay saamaynta L-theanine ay ku leedahay 98 wiilal ah oo ay da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 12 jir. -theanine laba jeer maalintii. Kooxda kale waxay heleen kaniiniyada placebo.
Lix toddobaad kadib, kooxdii qaadatay L-theanine waxaa la ogaaday inay haysteen hurdo dheer, nasasho badan. In kasta oo natiijooyinku rajo leeyihiin, cilmi-baaris dheeri ah ayaa loo baahan yahay ka hor inta aan loo caddayn inay ammaan tahay oo waxtar leedahay, gaar ahaan carruurta.
Baakadaha iyo keydinta: Kartoonada 25kg.
Taxaddarrada keydinta: ku keydi bakhaar qabow, qalalan oo hawo wanaagsan leh.
Awoodda wax soo saarka: 1000 tan / sanadkii.
Hore: Hordenine hydrochloride
3-Hydroxybutanoic acid cusbada magnesium
Sodium Beta Hydroxybutyrate (BHB Na)